သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု - လက္ခဏာတွေ, အကြောင်းတရားများ, ကုသမှု, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု၏ cauterization
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု - ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်3အကောင်းဆုံးစွန့်ပစ်ခြင်းနည်းလမ်း၏5အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု - ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်အနာကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အတိမ်အနက်ကိုအပေါ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်မီးယပ်ရောဂါ။ ရောဂါဗေဒကျယ်ပြန့်သည်နှင့်သားမွေးတယ်ဆိုတာအသက်အရွယ်အမျိုးသမီး၏ 30% အတွက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏရောဂါကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု - ၏အကြောင်းတရားများ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုကဲ့သို့သောရောဂါများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကြောင်းရင်းများ, ဆရာဝန်တွေအချက်များ၏နံပါတ်ခေါ်ဆိုပါ။ ရောဂါဗေဒ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးပါမှုကြာ endocervite ။ ဒီရောဂါဟာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ epithelium များ၏တစ်ရှူးတည်ရှိသောဂလင်း၏အတွင်းသို့ function ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ဤအချက်ကိုလိုက်စားအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အထီးကျန်ဆရာဝန်တွေရဲ့တိုက်စားမှု၏အခြားဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများအနက်:
မျိုးပွားစနစ်၏ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း။ (gonococci, ဤရောဂါများများ၏အကြောင်းရင်းအေးဂျင့်သောရောဂါဖြစ်ပွားစေသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိ, Trichomonas အရေးပါသောအနေစဉ်အတွင်း, Staphylococcus) ကသားအိမ်ခေါင်း၏တိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, မျိုးပွားအင်္ဂါ၏ချွဲအမြှေးပါးအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးချိုးဖောက်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, columnar epithelium ဇုန်ဟာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ os အပြင်ဘက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းသားအိမ်ခေါင်း၏တိုက်စားမှုများပြားပြဿနာများကိုယ်ဝန်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်အလေ့အကျင့်ထဲမှာ, ချိုးဖောက်မှုကိုယ်ဝန်ပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမရှိတိုက်စားမှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရရှိလာတဲ့, အလုပ်သမားစဉ်အတွင်းသားအိမ်နှင့်သားအိမ်ခေါင်းအပေါ်အကြီးအကျယ်ဝန်များမှာပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကလေးကိုယ်ဝန်စဉ်နှင့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုသည့်အကြောင်းရင်းများပါဝင်သည်:
အပြောင်းအလဲကို ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက် ;
ဖြန့်ဝေစဉ်ကမလျော်ကန်သော suturing ။
မျိုးပွားစနစ်၏ကနျြးမာရေးကိုသူတို့ပြည်နယ်ကြောင့် nulliparous အမျိုးသမီးတွေအတွက်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု၏အကြောင်းရင်းများနှင့်လိင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ မကြာခဏ mucosal ဒဏ်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ရသောမိန်းမများအတွက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများ, ထိုပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ဆရာဝန်တွေ, လေ့လာနေပါတယ်။ မျိုးပွားစနစ် (ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများကျဉ်းမြောင်းနှင့်ရေတို vagina) သားဘွားဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့အခါ, စိတ်ဒဏ်ရာ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုအတွက်ရလဒ်အရာရှိ၏။ ရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသည့်အခြားအချက်များအနက်:
ဆရာဝန်များလည်ပင်း၏ချွဲအမြှေးပါးမဆိုတိုက်စားမှုကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရောဂါကူးစက်သို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အဆင်သင့်အချက်ကြောင်းသဘောတူသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကုထုံးအခြားရောဂါများမရှိ attachment ကိုလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စလူနာတှငျမှတျတမျးတငျထားတိုက်စားမှု၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကို, ဒီရောဂါအားလုံးကိုအမျိုးသမီးများသည်အခြားရောဂါဗေဒဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်မှာနေသောခေါင်းစဉ်:
erythroplakia (ထို mucosal မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အနီရောင်သွေးထွက်အစက်အပြောက်);
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ - သားအိမ်ခေါင်းခန္၏ဖျက်သိမ်းရေး၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့တိုက်စားမှုတစ်ဦးမဖြစ်မနေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအခါ။
အသွင်အပြင်အတွက်စစ်မှန်သောတိုက်စားမှုတစ်ဦးအနာဆင်တူပါသည်။ stratified squamous epithelium ရောင်ခြင်းမှဦးဆောင် mucosal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ တိုက်စားမှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏နေ့စွဲကနေ 1-2 ပတ်ကြာကြာသောရုပ်ပျိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း Self-ဖျက်သိမ်းရေးအခန်းထဲကလည်းမရှိသို့မဟုတ်ယင်း၏ ectopia သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု - squamous ဆဲလ် Cylinder ပုံစံဖြင့်အစားထိုးနေကြပါတယ်။
မီးယပ်လက်တွေ့တွင်ဆရာဝန်များကအချက်လှုံ့ဆျော မူတည်. စစ်မှန်တဲ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုအောက်ပါအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်အဆိုအရရာမှတစ်ဦးခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်သည်:
ရောင်ရမ်း - ကိုလိင်အင်္ဂါ၏ရောဂါကူးစက်မှု၏ရလဒ်;
စိတ်ထိခိုက် - ကကလေးမွေးဖွား, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စိတ်ဒဏ်ရာ, ခွဲစိတ်, ကြမ်းလိင်ဆက်ဆံမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်;
ဓာတု - douching ကာလအတွင်းတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးတ္ထုများနှင့်ထိတွေ့ရာမှ mucosal ဒဏ်ရာကဖွဲ့စည်းသည်,
Burn - cauterization သောအဘို့ကိုသွန်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်,
trophic - ချိုးဖောက်မှုများသားအိမ်ခေါင်းအသှေးကိုပေးဝေရေး၏ရလဒ်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်တိုက်စားမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စင်မြင့်မှာသားအိမ်သားအိမ်ခေါင်း၏ညာဘက်တစ်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရလဒ်သားအိမ်ခေါင်း၏အင်္ဂါဇာတ်အဘို့ကိုအတွက်အလွှာများနှင့် columnar epithelium အကြားနယ်နိမိတ်တစ်ဦးက displacement ပါ။ ဒါဟာချွတ်ယွင်းကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားရှိပြီးမကြာခဏ 23-25 ​​နှစ်ကောက်ကာငင်ကာဖြေရှင်း။ ဒါကသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု nulliparous အမျိုးသမီးများနှင့်ခံတွင်း contraceptives ၏ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်ကြသည်သောသူတို့အဘို့ပုံမှန်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်ရောဂါအဘို့အကြောင်းမှာမီးယပ်သားဖွားသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြားဖြတ်နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကြားနာပြီးနောက် - မိန်းမတို့သည်အစဉ်အမြဲမသိရပါဘူး။ အဆိုပါ columnar epithelium ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး multilayer ပြားချပ်ချပ် epithelium ထံသို့စလှေတျသောလည်ပင်းသောအဘို့ကိုပေါ်သောရောဂါဗေဒ၏ပုံစံကိုဖျောညှနျးရန်ဤဝေါဟာရကို။ စာမေးပွဲတွင်, ဆရာဝန်သေးငယ်တဲ့အမျှင်တွေနဲ့အနီရောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ရှေ့မှောက်တွင်, ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်များကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်စားမှု၏ဤအမျိုးအစားများ၏ဖော်ပြချက်အဘို့ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုမကြာခဏ "ectopic" ။
Pseudo ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ပင်သိရသည်။ ဒုတိယကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရောဂါသန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်၏ချိုးဖောက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ ဝယ်ယူကြားဖြတ်၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု - လက္ခဏာများ
ပြင်းထန်လက်တွေ့ရုပ်ပုံ၏မရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရောဂါကနဦးအဆင့်။ ရောဂါ Symptomatology ဝှက်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ သာအမျိုးသမီးများ၏သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖမ်းယူဖို့စတင်အဆိုပါချွဲအမြှေးပါးကိုတွေ့ရှိရပါသည်များ၏အာရုံစူးစိုက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်:
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုနှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်ရိနာစွဲရောဂါဗေဒ၏ဦးဆောင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသိသိသာသာ volume ထဲမှာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လစဉ်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်တိုက်စားမှုဝိသေသလက္ခဏာလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်, လိင်အင်္ဂါကနေသွေးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်အတွင်းအနာစိမ်းကနေအသှေးကိုလွှတ်ပေးရန်ပြောခြင်းငှါအရာလက်ရှိနေအိမ်များ၏တိုက်စားမှုမှတစ်ဦးအပိုဆောင်းဒဏ်ရာလည်းမရှိ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု - ကုသမှု
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုများ၏ကုသမှုကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီကုထုံးအစီအစဉ်ရောဂါမရွေးထားတဲ့အတိုင်း, နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေပါဝငျသညျ။ တိုက်စားမှုမျိုးပွားမှုစနစ်အတွက်ကူးစက်ရာမှလျှင်ဆရာဝန်များကရောဂါပိုးအမျိုးအစားနှင့်အညီ, antibacterial, ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကုသသတ်မှတ်။ ကုထုံးတစ်ခုသင်တန်းပြီးစီးအပေါ်သို့လည်ပင်း၏ချွဲအမြှေးပါး၏တိုက်စားမှုကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းမှုသွားရောက်လည်ပတ်မည်။ ထိုသို့သောကုသမှုတိုက်စားမှုပင် nulliparous အမျိုးသမီးများကိုဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသညျ။ ယခင်ကသာမွေးဖွားပြီးနောက်ရောဂါကုသရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးကုသမှုတိုက်စားမှုအပြောင်းအလဲများကိုများ၏အကြောင်းရင်းမှာတိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာ precipitating အချက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းထင်းမီးများပြန့်ပွားကာကွယ်တားဆီးဖို့, တိုက်စားမှုကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏နံပါတ်တိုးပွားလာမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချမသာကူညီပေးသည်။ အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုကနေဖယောင်းတိုင်ရှိသည်။ ပွနျလညျလှုံ့ဆော်ဖို့နဲ့ရောဂါကူးစက်မှု၏ပူးတွဲတားဆီး, ထင်းမီးအနာရောဂါစွဲတစ်ရှူးအပေါ်တိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဤပုံစံ။ တိုက်စားမှုအပန်းဖြေကုသမှုကမီးပွားချရန်သည့်အခါ:
အင်္ဂါဇာတ် microflora တစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုများ၏ဖောက်ဖျက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ Mucosal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။
အဆိုပါ sacrum အတွက်ရာသီကာလအတွင်းနာကျင်မှု။
တိုက်စားမှု၏ cauterization ပြီးနောက်ရှုပ်ထွေးကုသမှု။
တိုက်စားမှုများ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြု suppositories တို့တွင်အောက်ပါဆေးဝါးအသုံးပြုမှု:
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
အိမ်တွင်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုများ၏ကုသမှုအများပြည်သူပိုက်ဆံမပါဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးသမားတစ်ဦးတွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုံးမပြုခင်ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာများထဲတွင်အောက်ပါချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်ကြသည်။
အခြောက်လှန်း Marigold ပန်းပွင့် - 0.5 ခွက်;
ဗော့ဒ်ကာ - 500 ml ကို။
တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သော, နေသာရာအရပ်သို့ထားပါနှင့် 14 ရက်အပြင်းအထန်တောင်းဆို။
filter ။ ပြုတ်ရည် 1 ဇ။ Spoon နေ့ရက်တိုင်းဖြုန်းနွေးရေနဲ့ douching တစ်ဖန်ထည့်သွင်းထားသည်။ menses ပြီးနောက်ဒုတိယ နေ့မှစ. စတင်။ ကုသမှုသင်တန်း - 21 ရက်။
ကြက်ဆူပင် - 2-3 ပေါက်;
အကျော်အသီးဖျော်ရည် -3လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ;.
ပျားရည် - 1.5 Tsp ..
အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် Blend ဖြစ်ကြသည်။
ရရှိလာတဲ့အရောအနှော swab စိုစွတ်ကြ၏နှင့်ညဉ့်အချိန်၌လိင်အင်္ဂါသို့ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ကုသမှုသင်တန်း 15 ရက်။
Marigold ပန်းပွင့် - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
ရေ - 200 ml ကို။
မိနစ် 20 အပြင်းအထန်တောင်းဆို။
filter များနှင့်သယ်ဆောင်ရရှိသော douching ဖြေရှင်းချက်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု၏ Radiowave ကုသမှု
Moxibustion သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုရေဒီယိုလှိုင်းတံပိုးရောဂါကုထုံးတစ်ခုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုပျက်စီးသွားသောတစ်ရှူးနှင့်အဆက်အသွယ်ရှင်းလင်းစေပါတယ်။ အထူးယန္တရားဖြတ်သန်းလက်ရှိလည်ပင်း၏ဘေးဒဏ်သင့်သောအဘို့ကိုရန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကနေတဆင့်စေလွှတ်သောရေဒီယိုလှိုင်းတံပိုးသို့ကူးပြောင်းသည်။ သက်သက်ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်အပူ, ဖယ်ထုတ်လိုက်ပူလောင်၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ထိတွေ့မပေးပါ။ နာကျင်မှုလျှော့ချရန်ဆရာဝန်တစ်ဦးထုံဆေးသုံးနိုင်ပါသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာ, ဆေးသမားလေဆာကုထုံးထုတ်လွှတ်မှု။ ဒီနည်းပညာဟာလေဆာရောင်ခြည်၏တွေ့ရှိရပါသည်အပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပါဝငျသညျ။ အကြိုလည်ပင်းတိုက်စားမှုများ၏နယ်နိမိတ် delineate အထောက်အကူပြုအိုင်အိုဒင်းဖြေရှင်းချက်ဖြည့်ဆည်း။ လေဆာရောင်ခြည်၏အရေးယူမှုအောက်၌ပြိုကျစေခြင်း, ပျက်စီးဆဲလ်ကနေအစိုဓာတ်၏ရေငွေ့ပျံတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော cauterization သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုနာကျင်မှု့မရှိတဲ့နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားနေသည်။ ကုသမှုပြီးနောက်, အမာရွတ်များကိုဖွဲ့စည်းကြသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုကုသပေးဖို့ဘယ်လောက်အဆုံးအဖြတ်, ကုထုံးတစ်ခုနည်းလမ်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအခါ, ဆရာဝန်များမကြာခဏ cryodestruction နည်းလမ်းနှုနျး။ ၎င်း၏အမူအကျင့်အတွက်ထိခိုက်နစ်နာတစ်ရှူးအထူးယန္တရားကို အသုံးပြု. အရည်နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ကုသနေပါတယ်။ ကြံစည်မှုတစ်ရှူးအဖြူဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါဆဲလ်နောက်ဆုံးမှာသေဆုံး, မိမိတို့အရပျ၌အသစ်သော, ကျန်းမာသောသူတို့၏တစ်ဦးဖွဲ့စည်းရေးလည်းမရှိ။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 15 မိနစ်ကြာရှည်ခံသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု၏ cauterization ပြီးနောက် copious ကြဲကြဲဥတုရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြာချိန် 5-7 ရက်အတွင်းထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သငျသညျအကွံဉာဏျလိုအပ်ပါတယ်။
Ureaplasma အမျိုးသမီးတွေ - စံ
သားအိမ် fibroids ၏ဖယ်ရှားရေး - ဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်
10 ရက်များ၏နှောင့်နှေးခြင်း, စမ်းသပ်အနုတ်
ရင်ပတ်၏ fibrotic ရောဂါ
Kegel သားအိမ် prolapse များအတွက်တင်ပြသော
Salpingo - ကုသမှု
တစ်ဦး smear အတွက် Trichomonas
Menses သွေးဆောင် Djufaston သောက်ဘယ်လိုနေသလဲ?
သန်း 500 ပေါင်ကျိုးနပ်ခိုးယူရတနာ: Rothschild နွယ်စုဆုံးရှုံးမှုရေတွက်!
အတွင်းပိုင်းအတွက် Desktop ကိုအဖော်
အဘယ်ကြောင့် pies ၏အိပ်မက်?
Meghan Markle မင်းသမီးဒိုင်ယာနာရဲ့လက်စွပ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်, ကမ်ဘာပျေါတှငျအလှဆုံးလျှပ်စစ်ကားပေါ်တွင်တစ်ဦးစီးနင်း
ကလေးများ2နှစ်အကြားခြားနားချက်
ဖက်ရှင် rainwear နွေဦး 2013
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဖိနပ် Nike က 2013 ခုနှစ်,
တစ်ဦး Blender အတွက်နို့တုန်လှုပ်
32 "အိုမင်းသော" ခေတ်ပြိုင်သားသမီးရဲ့စာအုပ်တွေကို၏စာမကျြနှာ၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း!
ဘာဘေးဒိုးစ - ဆွဲဆောင်မှုများ
မိမိလက်နှင့် var ဥယျာဉ်တော် - ပြင်ဆင်ထားရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုစာရွက်?
Guljanija ထံမှကြောင်များအတွက် tablets